चार देशमा राजदूत सिफारिस, अस्ट्रेलियामा महेश दाहाल- समाचार - कान्तिपुर समाचार
चार देशमा राजदूत सिफारिस, अस्ट्रेलियामा महेश दाहाल
कतारमा नारद भारद्वाज, स्पेनमा दावाफुटी शेर्पा र बंगलादेशका लागि डा. वंशीधर मिश्र
काठमाडौँ — सरकारले चार मित्रराष्ट्रका लागि कूटनीतिक अनुभव नभएका चार जनालाई राजदूत सिफारिस गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले अस्ट्रेलियाका लागि महेश दाहाल, कतारका लागि नारद भारद्वाज, स्पेनका लागि दावाफुटी शेर्पा र बंगलादेशका लागि डा. वंशीधर मिश्रलाई राजदूत सिफारिस गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
राजदूत सिफारिसमा सत्तारूढ नेकपाभित्रको शक्ति सन्तुलन मिलाइएको छ । सिफारिसमा परेका चार जना प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी ओली, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तथा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल निकटका व्यक्ति हुन् । सरकारले राजदूत सिफारिस गरेको निर्णय औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिसकेको छैन ।
तत्कालीन राजदूत लक्की शेर्पा फर्किएपछि खाली भएको अस्ट्रेलियामा अध्यक्ष दाहालको प्रस्तावमा उनीनिकट दाहाललाई सिफारिस गरिएको छ । नेपाल टेलिभिजनको अध्यक्ष भइसकेका दाहाल अध्यक्ष दाहालका जिल्लावासी र नातेदार हुन् ।
भारद्वाज प्रधानमन्त्री ओलीकै प्रस्तावमा राजदूत सिरफारिसमा परेका हुन् । झापाकाण्डमा १२ वर्ष जेल परेका उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अंग्रेजी विषयको सहप्राध्यापकबाट रिटायर्ड हुन् । पार्टी एकता हुनुअघि उनी तत्कालीन एमालेको विदेश विभागका सदस्य थिए ।
राजदूत सिफारिस दावाफुटी शेर्पा पहिलो महिला सगरमाथा आरोही पासाङ ल्हामुकी छोरी हुन् । ३७ वर्षीया शेर्पा प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्तावमा राजदूत सिफारिसमा परेको स्रोतको भनाइ छ । उनी दुई महिनाअघि पासाङ ल्हामु प्रतिष्ठानको अध्यक्ष चुनिएकी छन् । अमेरिकाबाट मास्टर्स डिग्री गरेकी उनी संयुक्त राष्ट्रसंघीय विश्व खाद्य कार्यक्रममा समेत कार्यरत थिइन् ।
अघिल्लो सरकारको पालामा नियुक्त राजदूत डा. चोपलाल भुसाललाई फिर्ता गरिएपछि रिक्त बंगलादेशमा सिफारिस डा. मिश्र पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री तथा नेकपा नेता हुन् । मिश्र वरिष्ठ नेता नेपालको प्रस्तावमा राजदूत सिफारिसमा परेका हुन् ।
सरकारले इजरायलका लागि नेपाली राजदूत अञ्जान शाक्यलाई साइप्रसका लागि गैरआवासीय राजदूत नियुक्त गरेको छ ।
मुख्यसचिव सात दिन बिदामा
यसैबीच मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी ७ दिन लामो बिदामा बसेका छन् । उनी आइतबारदेखि लागू हुने गरी बिदामा बसेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
सरकारले नयाँ मुख्यसचिव नियुक्तिका लागि रेग्मीलाई राजदूत सिफारिस गर्ने तयारी गरिरहेको हल्ला चलिरहेका बेला उनी बिदा बसेका हुन् ।
प्रकाशित : जेष्ठ २४, २०७६ २१:४४
पोखरा स्पोर्टस् अवार्ड : युकेश र सुस्मी वर्ष खेलाडी
(लेखनाथ) — चौंथो संस्करणको पोखरा स्पोर्टस् अवार्डमा पुरुषतर्फ पाराग्लाइडिङका युकेश गुरुङ र महिलातर्फ फुलकन्ट्याक्ट कराँतेकी सुस्मी श्रेष्ठ वर्ष खेलाडी घोषित भएका छन् । खेलकुद पत्रकार मञ्च गण्डकीले शुक्रबार पोखरामा विभिन्न विधामा अवार्ड प्रदान गरेको हो ।
गण्डकी प्रदेशका लागि २०७५ मा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने खेलाडी, प्रशिक्षक, खेल संघ र पत्रकारलाई अवार्ड प्रदान गरिएको थियो । वर्ष उत्कृष्ट खेलाडी पुरुषतर्फ युकेशसहित स्क्वासका अमृत थापामगर र फुलकन्ट्याक्टका रुपक नेपाली मनोनयनमा थिए । महिलातर्फ मनोनयनमा सुस्मीसहित सफ्ट टेनिसकी प्रीति बराल र सुटिङकी श्रेया केसी थिए । युकेशले टीभीएस अपाचे मोटरसाइकल र सुस्मीले टीभीएसकै विगो स्कुटर पुरस्कार पाए । पाराग्लाइडिङ प्रतियोगितामा भाग लिन देशबाहिर रहेकाले युकेशको अवार्ड उनका बुवा भूपालसिंह र आमा भगवती गुरुङले ग्रहण गरे ।
पारापाइलट बुवाकै संगतले युकेश सानैदेखि पाराग्लाइडिङसँग परिचित भए । उनले १५ वर्षकै उमेरमा पाराग्लाइडिङ उडाएका थिए । १८ औं एसियाडमा नेपालले पदक जितेको एकमात्र खेल थियो पाराग्लाइडिङ । इन्डोनेसियामा भएको एसियाडमा मेन्स क्रसकन्ट्रीतर्फ नेपालले रजत जित्दा उनी टोलीका मुख्य सदस्य थिए । हालै सम्पन्न आठौं राष्ट्रिय खेलकुदमा टिम क्रसकन्ट्रीमा उनकै समूहले स्वर्ण जित्यो । सन् २०१८ मा कोरिया र चीनमा भएका दुई छुट्टाछुट्टै पाराग्लाइडिङ पि्र-वर्ल्ड कपमा पनि उनी सहभागी भए ।
वर्ष महिला खेलाडी सुस्मीले अवार्ड ग्रहण गर्दा आँसु थाम्न सकिनन् । दोस्रो दक्षिण एसियाली क्योकुसिन कराँते च्याम्पियनसिपमा खुला तौल समूहमा उनले स्वर्ण जितेकी थिएन् । आठौं राष्ट्रिय खेलकुदको खुला तौल समूहतर्फ उनले कांस्य जितिन् । २९ औं युरोपियन च्याम्पियनसिप क्योकुसिन कराँतेमा कांस्य, पहिलो राष्ट्रिय क्योकुसिन बुदोकाइ कराँते च्याम्पियनसिपमा स्वर्ण, दोस्रो राष्ट्रिय नेपाल न्यु प्लाजा क्योकुसिन बुदोकाइ कराँतेमा ४० केजी तौलमा स्वर्णसहित वेस्ट फाइटरको उपाधि उनको उपलब्धि हो ।
लाइफटाइम अचिभमेन्ट अवार्ड बक्सिङका पूर्व खेलाडी चित्रबहादुर गुरुङलाई प्रदान गरियो । सन् १९८७ मा कोलकातामा भएको तेस्रो दक्षिण एसियाली खेलकुदमा उनले बक्सिङबाट रजत जितेका थिए । सन् १९८९ मा भएको चौथो दक्षिण एसियाली खेलकुदमा स्वर्ण जितेका उनले बेइजिङमा सन् १९९० मा भएको ११ औं एसियाली खेलकुदमा कांस्य जितेका थिए । स्याङ्जाको मनकामनामा २०१८ सालमा जन्मिएका उनी हाल वनविज्ञान अध्ययन संस्थानमा खेल शिक्षकमा कार्यरत छन् ।
यसअघि लाइफटाइम अचिभमेन्ट अवार्डबाट कृष्ण थापा, खड्गबहादुर रानाभाट र प्राडा वीरेन्द्रसिंह गुरुङ सम्मानित भइसकेका छन् ।
क्रिकेट खेलाडी अर्जुन कुमालले उदीयमान वर्ष खेलाडीको अवार्ड जिते । उनका प्रतिस्पर्धीमा आर्चरीकी अनुष्का शेरचन र आईटीएफ तेक्वान्दोकी सुस्मिता थापामगर थिए । बागलुङका अर्जुन हाल ८ कक्षामा पढ्छन् । थाइल्यान्डमा एसीसी यू-१६ इलाइट कपमा नेपालले स्वर्ण जित्दा टिममा उनी पनि थिए ।
वर्ष प्रशिक्षक फुलकन्ट्याक्ट कराँतेका दीपक गोदार भए । उनले ह्यान्डबलका भीमसेन शाक्य र हक्कीका राजेन्द्र पाठकलाई पछाडि पारे । दीपकले अवार्डस्वरुप प्राप्त २५ हजार रुपैयाँमा २५ हजार थपेर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघ कास्कीलाई प्रदान गर्ने घोषणा गरे ।
२०५० देखि खेलकुदमा छिरेका उनको प्रशिक्षण सुरुआत २०५४ देखि भएको हो । उनी हालसम्म जिल्ला, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गरी ५२ खेलमा सहभागितामध्ये ५ स्वर्णसहित ३२ पदक जित्न सफल छन् । उनी आठौं राष्ट्रिय खेलकुदमा गण्डकीलाई ५ स्वर्ण दिलाउन सफल भए ।
चर्चित वर्ष खेलाडीको अवार्ड श्रेया केसीले जितिन् । उनले एसएमएस भोटका आधारमा उक्त अवार्ड जितिन् । उनले आठौं राष्ट्रिय खेलकुदमा एकलतर्फ स्वर्ण र टिमतर्फ रजत जितेकी थिइन् ।
उत्कृष्ट खेल संघको उपाधि कास्की जिल्ला बास्केटबल संघले जित्यो । उत्कृष्ट पत्रकारिता अवार्ड रेडियो बाराहीका विनोद लामिछानेले पाए । उदीयमान खेलाडी, वर्ष प्रशिक्षक, चर्चित खेलाडीले जनही २५ हजार र खेल संघले १५ हजार रुपैयाँ पाए । पत्रकारिता अवार्ड २० हजार राशिको छ ।
मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेशमा खेलकुद एकेडेमी स्थापना गर्ने तयारी गरेको बताए । स्रोत र साधनले भ्याएसम्म खेलकदसम्बन्धी गतिविधिको सबै खर्च प्रदेशले बेहोर्ने उल्लेख गरे । आयोजक अध्यक्ष एकराज गिरीले अवार्डलाई निरन्तरता दिन सबैको साथ आवश्यक रहेको जनाए ।
प्रकाशित : जेष्ठ २४, २०७६ २१:१५